बिहीबार विष्णुको पूजा गरी जान्नुहोस् तपाईंको आज - satkar post
बिहीबार विष्णुको पूजा गरी जान्नुहोस् तपाईंको आज
मंसिर १९, २०७६ मा प्रकाशित
आज वि.सं. २०७६ साल मंसिर १९ गते बिहीबारको राशिफल इ.स. २०१९ डिसेम्बर ५, ने.सं. ११४० थिंलाथ्व, मार्ग शुक्लपक्ष । नवमी, २७:२९ उप्रान्त दशमी ।
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। प्रयत्न गर्दा दिगो काम प्रारम्भ हुन सक्छ। स्रोत–साधन जु’ट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। तर ख’र्च बढ्नाले अर्थ संग्रहमा बा’धा पुग्नेछ। सरसापट र भैपरी आउने कामले रकम बाहिरिन सक्छ। साँझतिर बसाइको स्थानान्तरण वा टाढाको यात्रा हुने सम्भावना देखिन्छ। परिस्थि’तिजन्य सम’स्याले अलि दु:ख पाइनेछ। बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) कीर्तिमानी कामको यश लिँदै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा नाम र दाम कमाउने समय छ। शुभचिन्तकहरूको सहयोग जु’ट्नाले मनग्य फाइदा हुनेछ। कर्मयोगले आम्दानी समेत बढाउनेछ। दिउँसोदेखि विभिन्न स्रोतबाट रकम हातलागी हुनेछ। तर, रकम जु’टाउँदा केही ऋ’णभार पनि बढ्न सक्छ। चिताएको काम बिग्रनाले दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला । मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) सामाजिक कामले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। आध्यात्मिक चेतनाले धर्मकर्म र सेवामा प्रवृत्त गराउनेछ। सानो प्रयत्नले कीर्तिमानी कामको यश लिने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् भने भविष्यका लागि धनसञ्चय र कर्मनिश्चय गर्ने समय छ। दिउँसोदेखि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। विभिन्न अव’सरले पछ्या’उनेछन् र जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ। कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) स्वास्थ्य क’मजोर रहनाले काम पूरा गर्न केही बढी समय लाग्नेछ। जिम्मेवारी बढे पनि न्यून उपलब्धिमा चि’त्त बुझाउनुपर्ने परि’स्थिति देखिन्छ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्‍याउनुहोला। दिउँसोदेखि स्थि’तिमा सुधा’र आउनेछ। चुनौ’तीहरू स्वतः ह’ट्नेछन् भने अ’वसर तथा सफलताले पछ्याउनेछन्। मिहिनेत परे पनि भाग्यले सफलताको उचाइमा पुर्याउनेछ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) सुरुमा रमाइलो यात्रा र मनोरञ्जनको आनन्द लिने समय छ। आतिथ्य खर्चिलो देखिए पनि सत्कार पाइनेछ। प्रेम र मित्रताको ब’न्धन कसिनेछ। विभिन्न भौतिक वस्तुहरू जु’टाउन सकिनेछ। दिउँसोदेखि आफन्तसँग सुमधुर सम्बन्धका लागि व्यवहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। स्वास्थ्यमा क’मजोरी देखापर्न सक्छ। प्रतीक्षित नतिजा क’मजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) रो’किएका काम बन्नाले मनग्य लाभ हुनेछ। द्वे’ष वा ई’र्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। चु’नौती प’न्छाएर काम बनाउन सकिनेछ। व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने नयाँ योजना शुभारम्भ हुनेछ। दिउँसोदेखि रमाइलो जमघ’टमा सहभागी भइनेछ। परिवे’श उल्लासमय रहे पनि बा’ध्यताले निरीह बनाउन सक्छ। प्रतिष्ठा एवं लोकाचारका लागि फ’जुल ख’र्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) सुखद समाचारले उत्साह जगाउनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। ता’रिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक अभि’व्यक्तिको प्रभाव बढ्नेछ। दिउँसोदेखि नयाँ कामतर्फ अग्र’सर भइनेछ। आम्दानीका स्रोत पनि बढ्नेछन्। प्रतिस्प’र्धामा समेत विजयी भइनेछ। मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौ’का दिलाउन सक्छ। बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) ह’तारमा नि’र्णय लिँदा काम बिग्र’न सक्छ। तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई सम’स्या पर्नेछ। बे’सुरमा बोल्ने बानीले पनि दु:ख पाइनेछ। अरूलाई दिएको वचन पूरा गर्न नसकिए पनि शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। दिउँसोदेखि बौद्धिक कलाको प्रभाव बढ्नेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। पहिलेको दु’विधाले नि’र्णायक मोड लिनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन्।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। कर्मयोगले नयाँ मोड लिनेछ भने मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम आर्जन गर्न सकिनेछ। उद्यो’ग र व्यापारमा वि’शेष फाइदा हुनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। दिउँसोदेखि साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ला। बे’सुरमा काम गर्ने बानीले पनि मेहनत खे’र जानेछ। पुरानो गतिले पनि काम बि’ग्रन सक्छ। मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) परि’स्थितिले नयाँ मार्गतर्फ अग्र’सर गराउन सक्छ। विविन्न भौतिक सुविधाका वस्तुहरू जुटा’उन सकिनेछ। दिगो काम प्रारम्भ हुनाले आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन्। अध्ययनमा प्रगति हुनुका साथै अनु’भवलाई पनि नि’खार्ने अव’सर प्राप्त हुनेछ। विभिन्न स्रोत-साधन प्राप्त हुनेछन् भने कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। नगद जु’ट्नाले दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ । कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) इच्छाशक्ति बढ्नुका साथै कीर्तिमानी कामको यश लिने अव’सर प्राप्त हुनेछ। समय फुर्सदिलो देखिए पनि रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सकिनेछ। पारिवारिक जमघ’टका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। विभिन्न अ’वसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परि’वर्तन आउनेछ। सानो प्रयत्नले दिगो काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। बोलीका भरमा काम बन्न सक्छ। मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) सुरुमा ख’र्च बढ्नुका साथै अर्थअभा’वले स’ताउन सक्छ। फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। अरूको विश्वासमा पर्दा धो’का हुन सक्छ। टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नाले यात्रा सम्भावना देखिन्छ। दिउँसोदेखि परि’स्थिति अ’नुकूल बन्नाले महत्त्वाकांक्षी काम गर्न सफल भइनेछ। तारि’फयोग्य कामले प्रशंसक बढ्नेछन्। ज्ञान, कला र व्यक्तित्व नि’खार्ने समय छ।